बनेपा नगरपालिकाको नीति, कार्याक्रम तथा बजेट सार्वजनिक – NamoBuddha Khabar
बनेपा नगरपालिकाको नीति, कार्याक्रम तथा बजेट सार्वजनिक
शनिबार, भाद्र ०९, २०७५ | १६:५४:३४ |
आ.ब. २०७५÷०७६ का लागि
यस सभाका प्रमुख अतिथि माननीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाज्यू,यस नगरसभाका सभासद् महोदयहरु, आमन्त्रित प्रमुख अतिथि तथा अतिथिगण, सञ्चारकर्मी साथीहरु, कर्मचारी वर्ग तथा उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द
२०७४ सालको ऐतिहासिक स्थानीय, संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनहरु सम्पन्न भइसकेको यस परिवेशमा हामी बनेपा नगरपालिकाको गौरवमय तेस्रो नगर सभामा सहभागी भइरहेकाछौं । यस गरिमामय सभामा उपस्थित सम्पूर्ण सभासद् एवं सहभागी महानुभावहरुमा नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु । आजको नेपाल देखाउनका लागि लोकतान्त्रिक एवम् गणतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै जीवनसँग लडिरहेका जनआन्दोलन २०६२÷६३ का घाइते मुकेश कायस्थ लगायतका घाइते दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै शीघ्र स्वास्थ लाभको कामना गर्दछु ।
नेपालको संघीय राजधानीको पूर्वीद्वारको रुपमा रहेको यस नगर ऐतिहासिक हिसाबले आफैंमा अत्यन्त महत्वपूर्ण त छँदैछ । त्यसमा पनि अझ कृषि र वाणिज्यको क्षेत्रमा समेत यो नगर काभ्रे लगायतका अन्य पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुको केन्द्रबिन्दुमा रहेकोछ । ग्रामीण र शहरी परिवेश मिश्रित भूगोल रहेको यस नगरबासीहरुका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, पर्यटन लगायत अनगिन्ती अपेक्षाहरु पूरा गरी ‘सम्वृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक बनाउनु आज हाम्रो प्रमुख कार्यभार रहेको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर राख्दै विगत वर्षमा समग्र बनेपाको पूर्वाधार निर्माणका लागि रुपरेखा तयार गरेकाछौं । उक्त रुपरेखालाई सार्थक बनाउन पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी वृद्धि र औद्योगिक विकासका माध्यमद्वारा हाम्रा लक्ष्य र उद्देश्यहरु प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नैपर्दछ । तर यो कार्य सहज भने छैन । त्यसका निमित्त थुप्रै चुनौतीहरु हाम्रा सामु छन् । तथापि चुनौतीहरुका बीचमा पनि उपयुक्त योजना छनौट र कार्यान्वयन गरी लक्ष्यहरु हासिल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरु,
चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अन्त्यतिर हामीआई सकेका छौं । यस अवसरमाहामीले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपित आयोजना कार्यक्रमहरुकावारेमा समीक्षा गर्न अनुमती चाहन्छु । मूलुकको परिवर्तित व्यवस्था अनुसार बनेपा नगरको सांगठनिक ढांचा, जनशक्ति, सेवा प्रबाहकावारेमा विस्तारै व्यवस्थित हुंदै गईरहेको यहांहरुलाई विदितै छ । स्थायी रुपमा संगठन, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारको रुपमा सेवा प्रबाहको सुव्यवस्था मिलाउन अझै केही समय लाग्नेनै छ ।
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा स्थानीय निकायहरु संचालनहुंदै आएको परिस्थितिमा गतवर्ष यो अवस्था अन्त्यभएको छ । साथै स्थानीयतहका रुपमा नगरपालिका आईसके पछि जनप्रतिनिधिको बहाली पश्चात जनताहरुको आकांक्षा, समस्याहरु अझबढेको अवस्थाथियो । सीमित आन्तरिक श्रोतको वावजुत हामीले रु. ५१ करोड ३२ लाख ७४ हजारवजेट बनाउन सफल भयौं ।
चालु खर्च तर्फ कूलवजेटको २२.८५ प्रतिशत र सशर्त र सार्वजनिक निर्माण सहितको पूजिगततर्फ ६३.८२ प्रतिशत रहेको यस वजेटमा हामीले ठूला महत्वाकांक्षी कुरा भन्दापनि यथार्थको धरातलमा रही जनताका तत्काल आवस्यकताहरु परिपूर्ति गर्नु पर्ने सवालहरुमा केन्द्रित भएर वजेट निर्माण भएको यहांहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । त्यसैले जनताका सानातिना आयोजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । यस वर्ष पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक तथावातावरण तर्फका विकासका योजनाहरु करिब ४ सय ३० वटा भन्दा बढी स्वीकृत भई तिव्र रुपमा कार्यान्वयन भईरहेको छ ।
करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाहरु सम्पन्न भैसकेका छन् । सम्पूर्ण आयोजनाहरुमा बढी से बढी जनताहरुको सहभागीभई अपनत्वलिउन् भनी स्थानीयजनतालाई आयोजना संचालनगर्न अर्थात उपभोक्ता समितिवाट संचालन गरिएको छ । बसपार्क सुधार, सडक पीचका ९ वटा, सडक ट्र्याक, पक्की ढल नालीहरु, सडक स्तरोन्नती, पुण्यमाता, चण्डेश्वरी करिडोर, पनौती मार्ग पुटपाथ, नगर एवं वडा भवन निर्माण सुधार, अन्य सामुदायिक भवनहरु, सिंचाई कुलोहरु, खानेपानीका आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् ।
त्यस्तै सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, कृषि, पशु, वातावरण आर्थिक विकासका प्रस्तावित क्रियाकलापहरु संचाल नगरिएका छन् भने सरसफाई व्यवस्थापनका कार्यलाई विशेष ध्यान दिई स्थायी निदानकालाई क्रियाशील रहंदै आएका छौं । चालु आ.व.को वजेटको समग्र संक्षेपमा समीक्षा गर्दा प्रक्षेपित आयव्यय करिब ८५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने आंकलन गरिएको छ ।
हिले जलजले सीमसार क्षेत्र संरक्षण एवं विकासका लागि विशेष महत्वदिई डिपिआर तयार गर्ने कार्य शुरु भइरहेको र चण्डेश्वरीमा पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि प्रकृया शुरु गरिएको छ । साहित्यिक श्रृजनाका माध्यमवाट सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक परिवर्तनको लागि श्रष्टा भवननिर्माणको कार्य अगाडी बढाईने छ ।
आगामीवजेटमा चालु वर्षमा संचालनभएको आयोजनाहरुको समीक्षागर्दै दीगो योजना(क्गकतबष्लबदभि उबिललष्लन) लाई ध्यानमा राखिदीगो विकासको अवधारण अनुरुप आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रस्तावित विकास कार्यक्रमहरु संचालन गर्न यहांहरुको सदाझै सहयोग पाईरहनेमा विश्वस्त छु ।
यिनै कुराहरुलाई ध्यान दिँदै आ.ब. २०७५÷७६ का लागि यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दछु ।
बनेपा नगरपालिका भित्रको आर्थिक विकासका लागि निम्न नीतिहरु लिइनेछ ।
१) आन्तरिक आय तर्फ
-आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने सम्भावना भएका सम्भाव्य सबै क्षेत्रको अध्ययन, पहिचान गरी व्यवस्थित ढंगले करको दायरामा ल्याइने छ । यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गरिने छ । नगरले व्यापार, व्यवसाय, उद्योग–कलकारखाना आदिको लगत राख्दै उपयुक्त नीतिको आधारमा करको दायरामा ल्याइनेछ ।
-कर र राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सबै वडा कार्यालय कम्प्युटरको व्यवस्था भइसकेको छ । यसमा सफ्टवेयर जडान इ–कनेक्सनको माध्यमद्वारा नगर कार्यपालिकासँग जोडिनेछ ।
व्यवसाय कर, घरभाडा कर र जग्गाभाडा कर लगायतका आन्तरिक आयका स्रोतहरु संकलनका लागि तयार पारिएको कर नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ।
बनेपा नगरपालिकामा बढ्दो सवारी चापलाई मध्यनजर गरी अव्यवस्थित सवारी साधन पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरिनेछ ।
आन्तरिक आयको दीगो अभिवृद्धिका लागि नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका सम्पति बहालमा दिने नीतिलाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
कर, शुल्क तथा आन्तरिक आयलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग बाणीज्य संघ, सहकारी संस्था तथा अन्य उपयुक्त व्यावसायिक क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
२) कृषि विकास तर्फ
परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न जोड दिइनेछ ।
कृषकहरुलाई कृषि उत्पादनको समुचित मूल्य प्राप्त गराउनका लागि आवश्यकता अनुसार हरेक वडामा कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र स्थापनामा जोड दिइनेछ ।
तरकारी थोक बजार व्यवस्थापन र मूल्य समायोजन कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउन कृषक समूहलाई नै थोक बजार संचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
माटोको उर्वराशक्तिलाई जोगाई राख्न माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै उर्वराशक्ति जोगाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
प्रदूषित कृषि उपजको उपभोगबाट आफू जोगिऊ र अरुलाई पनि जोगाउन “प्राङ्गारिक उपजको प्रयोग गरौं” भन्ने नारा अभियानका रुपमा संचालन गरिनेछ ।
हरेक टोलको पहुँच हुने गरी फलफूल, तरकारी, फूल नर्सरी स्थापनामा जोड दिईने छ ।
बाँसडोल र नाला क्षेत्रलाई आलुको सुपरजोनको रुपमा थप विकास गरिने छ ।
टनेल खेतीलाई व्यावसायीकरण र बिस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
उत्पादनमुखी कृषि प्रणालीमा युवाहरुको आकर्षण तथा सहभागितालाई विशेष जोड दिइनेछ ।
बाली विमा कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार गरी र प्रभावकारी उपयोग गर्ने वातावरण बनाईने छ ।
कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगहरुलाई उत्पादन तथा प्रशोधनकालागि नीति बनाई अनुदानकोव्यवस्था गरिने छ ।
साँगा क्षेत्रमा सञ्चालित लप्सीजन्य उद्योगहरुलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गर्न उद्योगीहरुलाई समूहगत कार्य गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै नगरका सम्भाव्यता भएका अन्य वडाहरुमा लप्सी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ ।
ठूला सिंचाई, साना सिंचाई , थोपा सिंचाई र प्लास्टिक पोखरी निर्मान तथा सुधारका योजनालाई प्राथमकिता दइिनेछ।
पाखो जग्गामा स्प्रीङ्गलर, थोपा सिंचाई प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३) पशु विकास तर्फ
प्राकृतिक र कृत्रिम गर्भाधानको माध्यमबाट नश्ल सुधार कार्यक्रम लाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गराइनेछ ।
पशुपालनलाई बढी उत्पादनमुखी र व्यवसायिक बनाउन गोठ सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिइनेछ ।
पशु विमा कार्यक्रमलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम लागू गरिने छ । पशुखोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
डाले घाँस र बहु–उन्नत जातका घाँसको उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
उपयुक्त स्थानमा दुग्ध चिस्यान केन्द्रहरु स्थापना गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
स्वच्छ, स्वस्थ मासु वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउन नगरस्तरमा कम्तीमा एकव्यवस्थित पशुपंक्षी बधशाला बनाउन जोड दिइनेछ ।
कुखुरापालन, बंगुरपालन तथा मासुजन्य उत्पादनमा आत्म निर्भर बन्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी सो अनुसारको कार्ययोजना लागु गरिनेछ ।
बनेपा नगरपालिका वडा नं. ४ नाला चिसापानीमा रहेको नेपालको पहिलो दुग्ध चिस्यान केन्द्र हाल भग्नावशेषमा रहेकाले उक्त स्थानलाई कृषि संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना निर्माण गरिनेछ ।
४) सहकारी र वित्तीय क्षेत्र तर्फ
सहकारी संस्था, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र लगायतका क्षेत्रबीच साझेदारी गर्दै सहकारितालाई प्रवद्र्धन गरिंदै लगिनेछ ।
सहकारी उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धन अन्तर्गत स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित सहकारी उद्योग स्थापना गर्दा कर छुट दिने नीति लिइनेछ ।
कृषि क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर सहकारी साझेदारीमा कृषि उत्पादन, बजारीकरण तथा प्रशोधनमा जोड दिइनेछ ।
बैंक, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्वकअन्तरगत सामुदायिक विकासका गतिविधिहरुमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गराइने छ ।
बेरोजगारीको व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त व्यापारिक योजनामा वित्तीय क्षेत्रसंग सहकार्य गरिने छ ।
साना र सीमान्तकृत कृषकलाई समूह सहकारीमा आबद्ध गराई कम आयतन तर उच्च मूल्यकाबालीनाली उत्पादन बृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
युवाहरुको स्वरोजगार सिर्जना गर्न सहकारी मार्फत परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्न नीति लिइनेछ ।
अब म बनेपा नगरपालिका भित्रको सामाजिक विकाससँग सम्बधित नीतिहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । उसका लागि निम्न नीतिहरु लिइनेछ ।
१) शिक्षा तर्फ
सबै बालबालिकाहरुलाई बाल विकास केन्द्रसम्मको पहुँच पु¥याउन हरेक सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा एक बाल विकास केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ ।
आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गराउने नीति लिइने छ ।
कुनै एक सामुदायिक विद्यालयलाई छनौट गरी नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ ।
हरेक वर्ष नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमध्ये उत्कृष्ट एक विद्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गरिनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको पठन पाठनलाई प्रोत्साहित गर्दै सोही अनुरुपको जनशक्ति व्यवस्थापन
गरी अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तकहरु समेत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी विवरणलाई नगरपालिकाको सूचना प्रणालीमा समावेश गरिनेछ । अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाइने छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुलाई स्थापित मानकका आधारमा ग्रेडिङ गरी सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।
भौगोलिक अवस्था, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात लगायतका आधारमा विद्यालय तथा कक्षा समायोजन गर्दै जाने नीति लिइनेछ । सोही आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिनेछ ।
कृषि, पशु, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापन, निर्माण जस्ता बहुप्राविधिक शिक्षालयको विकासमा जोडदिइनेछ ।
अपाङ्ग÷भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरुको शैक्षिक पहँुचमा विस्तार गरिनेछ ।
नगरभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा निःशुल्क इन्टरनेटको पँहुच पु¥याइनेछ । शिक्षण प्रणालीलाई
आधुनिकीकरण गर्न मल्टिमेडिया शिक्षण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा निर्माण भएको नेपाल बनेपा बहुप्राविधिक महाविद्यालय ९एयथितभअजलष्अ
क्ष्लकतष्तगतभ०नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गराउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारको योजनामा रहेको कृषि विश्वविद्यालय बनेपा नगरपालिकाभित्र स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।
बनेपा नगरपालिकाभित्र हाल सञ्चालनमा नभएको विषयमा माध्यमिक तहमा प्राविधिक धार सञ्चालन गर्न चाहने कुनै
एक सामुदायिक विद्यालयलाई उपयुक्त योजना र सम्भाव्यताका आधारमा वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ अनुदान दिने नीति लिइनेछ ।
बनेपा नगरपालिकाभित्र भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा क्रमशः मष्नष्तबष्शिभम प्रविधिबाट पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएकोछ । साथै यस आ.ब.भित्र ३ वटा विद्यालयमा यो व्यवस्था गर्ने लक्ष्य दिइएकोछ ।
६) स्वास्थ्य तर्फ
बनेपा नगरभित्र पायक पर्ने स्थानमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ९एज्ऋ०स्थापना पहल गरिनेछ ।
भइरहेका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी प्रसुति सेवा उपलब्ध गराउँदै लगिनेछ । साथै नगरका
थप क्षेत्रहरुमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनामा जोड दिइनेछ ।
स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दा वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाहरु (आयुर्वेद, होमियोप्याथी, एक्युपञ्चर, न्यूरोप्याथी, योगा आदि) को व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ ।
खोप, पोषण, प्रसुति तथा एचआईभी एड्स जस्ता बहुपक्षीय सरोकारका विषयहरुका संयन्त्रहरुलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ ।
क्यान्सर, मुटुरोग, डेङ्गो, क्षयरोग, जस्ता खतरनाक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण गर्ने खालका सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
बाल तथा मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणमा जोड दिइनेछ ।
बनेपा नगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास भएका व्यक्तिहरुमा उमेर वा अन्य कारणले हुने मोतीबिन्दुको निःशुल्क
शल्यक्रियाका लागि रेयुकाइ आँखा अस्पतालसँग सहकार्य गरी यसै वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिनेछ ।
बनेपामा रहेको ब्लड बैंकको सेवालाई सरल र अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गरिने छ ।
प्रत्येक वडामा जेष्ठ नागरिक आराम तथा भेटघाट गर्ने गृह निर्माणगर्दै लगिने छ र यसै बर्ष कुनै एक वडामा जेष्ठ
नागरिक आराम तथा भेटघाट गर्ने गृह निर्माण आरम्भ गरिने छ ।
७) महिला विकास तर्फ
महिलाहरुको नेत्तृत्व विकास तथा महिला सशक्तिकरणका लागि महिला परिषद् गठन गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा महिलाहरुको पँहुच वृद्धि गरिदै लगिनेछ ।
महिलाहरुको सीप विकास, क्षमता विस्तार गर्ने र गरीबी घटाउने खालका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
महिलामाथि हुने हिंसा कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
महिलाहरुलाई सिलाइ बुनाइ, ब्युटीपार्लर लगायतका व्यवसायिक तालिम दिई व्यवसायतर्फ प्रेरित गराउने नीति लिइनेछ ।
महिला विकासमा स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनमा जोड दिइनेछ ।
महिलाको समग्र विकासको समन्वय गर्न कार्यविधि बनाई एक महिला परिषद् गठन गरिने छ ।
८) बाल विकास तर्फ
थप बालविकास केन्द्रको स्थापनामा जोड दिइनेछ ।
बालश्रम शोषणलाई दुरुत्साहन गर्ने नीति लिनुका साथै बालश्रम निवारणमा जोड दिइनेछ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
निर्माण हुने संरचनाहरु बाल तथा लक्षित वर्ग मैत्री बनाइनेछ ।
बाल बालिका सम्बन्धित सबै काम र क्षेत्रको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन समेत दिन कानुन निर्माण गरि एक बाल अधिकार अनुगमन समिति गठन गरिने छ ।
हरेक टोलमा बालक्लबहरु गठन गरी उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
नगर स्तरीय बालसञ्जाललाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
९) आदिवासी, जनजाति उत्थान तर्फ
नगरपालिका भित्रको सबै जातजाति, धर्म, समुदायका ऐतिहासिक सामाग्री र संस्कृित संरक्षण गर्न एक संग्रहालय निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
स्थानीय भाषा संस्कृतिको सम्बर्धन र प्रबद्र्धनको लागि पहल गरिनेछ ।
सीपमूलक, रोजगारमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रमहरुमा आदिबासी जनजातिहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
परम्परागत जात्रा, गुठी, पर्व आदिको महत्वलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ । साथै महत्वपूर्ण जात्रा एवं पर्वपूजा संचालनलाई व्यवस्थित बनाइनेछ ।
आदिवासी, जनजातिको उत्थानको लागि कार्यविधि निर्माण गरी आदिवासी तथा जनजाति उत्थान परिषद् स्थापना गरिनेछ ।
१०) उत्पीडित तथा दलित उत्थान तर्फ
छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मुलनको लागि सन्देशमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
शिपमूलक, रोजगारमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रममा उत्पीडित तथा दलितवर्गलाईप्राथमिकता दिइनेछ ।
परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
उत्पीडित तथा दलितसमुदायको हक हितका लागि काम गर्ने कार्यविधि निर्माण गरी एक दलित परिषद् गठन गरिने छ ।
११) युवा तथा खेलकुद विकास तर्फ
लागू पदार्थ दुव्र्यसन विरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
हरेक टोल र बस्तीमा विभिन्न खेल, व्यायम गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
नगरभित्र व्यवस्थित खेलकुद मैदान बनाउन यसैवर्षबाट कार्यारम्भ गरिनेछ ।
नगरस्तरमा कम्तीमा १ कवर्डहल बनाउनको लागि पहल गरिनेछ ।
युवाहरुलाई लक्षित गरी कृषि, पशुपालन तथा घरेलु उद्योग तर्फ आकर्षित गर्ने नीति लिईने छ र आवश्यक नीति निर्माण गरी अनुदान समेत प्रदान गर्ने नीतिलिइनेछ । युवाहरुलाई विभिन्न व्यवसायिक तालिम प्रदान गरिने छ ।
युवाहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने गरीकार्यविधि निर्माण गरी युवा परिषद गठन गरिने छ ।
पूर्वाधार विकास तर्फ निम्न नीतिहरु अवलम्बन गरिने प्रस्ताव गरेको छु ।
१) सडक तर्फ
आगामी चार वर्षभित्र बनेपा नगरपालिकाको सबै वडा कार्यालयसम्म पक्की सडकको पहुँच पु¥याइने छ ।
नगरमा नयाँ सडक निर्माण गर्दा आवश्यक प्रकृया र विद्यमान मापदण्ड अवलम्बन गर्दै भएका सडकहरुको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई विशेष जोड दिइनेछ ।
बनेपा नगर क्षेत्रमा रहेको बसपार्क सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ । नगरका अन्य आवश्यक स्थानमा बसपार्क निर्माण गर्न पहल गरिनेछ ।
सबै वडामा रहेका मुल सडकलाई क्रमशःस्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गरिनेछ ।
चण्डेश्वरी, पुण्यमाता, लगायतका नगरभित्रका सम्भाव्यता र आवश्यकता पहिचान भएका खोलाको दाँयाबाँया किनारमा हरित बेल्ट सहित करिडोर निर्माणलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखिने छ ।
सडकहरु निर्माण गर्दा मुआब्जा जस्ता कुराहरुमा अन्तरद्वन्द हुन नदिन कार्यान्वयन हुन अगावै टुङ्गो लाग्ने खालका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ । आयोजना तर्जुमाकै बखत सेवाग्राही÷लक्षित वर्ग तथा नागरिक समाजसमेतको सहभागितामा अनुगमन तथा मुल्याङ्कन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
एचभ(एचयवभअत र एयकत(एचयवभअत का तस्वीरका आधारमा मात्र योजना फरफारक हुने व्यवस्थालाई कडाइकासाथ लागू गरिनेछ ।
अरनिको राजमार्गको दायावाया रहेका अव्यबस्थित थोक बजारलाई सरोकारवाला संगको समन्वय र सहकार्यमा निस्चित स्थानमा व्यबस्थित थोक बजार केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
बनेपा नगरपालिका वडा नं ४ र २ नाला काशिभञ्जाङ्ग – नयागाँउ – कुन्ता सडक र व्यानढुङ्गा कलमसी वडा नं १ सडक स्तरउन्नतीको लागि यस पालिका मार्फत मत्री ज्यू को विशेष पहलमा बजेट विनियोजन गरी कार्य निरन्तरताका लागि अगाडी वढाइने छ ।
२) भवन तर्फ
नगरपालिकाकाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै विषयगत शाखाहरुलाई समेत पुग्ने गरी नगरकार्यपालिकाको भवन विस्तार गरिनेछ ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै वडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ ।
भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त भएका ऐतिहासिक, पौराणिक र धार्मिक सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणका लागि पुरातत्व विभाग लगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य गरी पुनःनिर्माणको योजना अघि बढाइनेछ ।
नगरपालिकामा सिटीहल र अतिथि गृह निर्माण गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ ।
भवन निर्माणमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मौजुदा स्थानीय भवन निर्माण तथा बस्ती विकास मापदण्डलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै ऐतिहासिक बस्तीहरुमा भवन निर्माण गर्दा परम्परागत कला झल्कने ढाँचामा निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
घर भवन जस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भूमिगत जल संचिती ९च्बष्ल ध्बतभच ज्बचदभकतष्लन० गर्ने कुरालाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
२०७२ बैशाखको भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई नक्सापास शुल्कमा दिँइदै आएको ५० प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा अपाङ्ता र बाल मैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
विद्युत नपुगेका स्थानमा विद्युत विस्तार गरिनेछ ।
विद्युत विस्तार भएको क्षेत्रमा स्तरोन्नतिमा जोड दिइनेछ ।
सडक बत्तीको व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाइने छ ।
मुख्य र संवेदनशील चोक, गल्ली तथा सडकहरुमा सिसिटीभि जडान गरिने छ ।
सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रहरुमा नविकरणीय उर्जाको प्रयोग मार्फत विद्युत आपूर्ति गर्नेकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
४) पर्यटन विकास तर्फ
बनेपा नगरपालिकाको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक पर्यटन प्रबद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।
योजना छनौटगर्दा पर्यटकीय पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
बनेपा नगरपालिका भित्र सम्भाबेता भएका स्थानहरुमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरु आकर्षित गर्न मनोरञ्जन पार्क, पिक्निक स्पोट विभिन्न धार्मिक तथा एतिहासिक प्रतिमाहरु निर्माणमा जोड दिइने छ ।
वडा नं. १० र १३ को सिमानामा पर्ने बासुकीमा भ्युटावर सहितको पर्यटकिय स्थल निर्माणकालागी प्रभावकारी र व्यबस्थित रुपमा अगाडी बढाइने छ । साथै सो स्थानसम्म व्हिलचियर बाटो बनाउन पहल गरिनेछ । साथै बनेपा नगरपालिका वडा नं. ६ गोसाइथान डाँडामा रहेको भ्युटावरको स्तरोन्नतिको आवश्यक योजना बनाइने छ ।
खुल्ला चिडिया घरको लागि जनागालको ठुलो बनको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने निति रहेकोमाबनेपा नगरपालिका समेतको पहलमा संघीय सरकारले आन्तरिक हवाईमैदाननिर्माण प्रकृया अगाडि बढाएको हुनाले सो योजना हाललाई स्थगन गरी चण्डेश्वरी वनमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नप्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
नगरपालिकाका कृषि पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा कृषि पर्यटनको डिजाईन र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
पर्यटन सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी बनउँदै पर्यटकीय उत्पादन प्रचार–प्रसारमा जोड दिइनेछ । पर्यटन सरोकारवालाहरुसँग समन्वय÷सहकार्य गरी पर्यटन गुरुयोजना तयारी र पर्यटनमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
काशीभञ्ज्याङ्मा सभाहल सहित श्रष्टाग्राम निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरीनिर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
टन्चोक, नागी, नाला बासुकीे, शशीपानी, गुम्बाडाँडा, बाउनडाँडा, नगरकोट भ्युटावर, पेरुङ्गे वनमा भ्युटावर लगाएतका स्थानहरुमा पर्यटन विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
बनेपा नगरका पर्यटकिय स्थल जोड्ने पदमार्ग समेत हुने सडक निर्माण गरिने छ ।
चण्डेश्वरी पारीको वनलाई व्यवस्थित पिकनिक स्पटको रुपमा विकास गर्न स्थानीय सरोकारवालाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरिने छ । सो स्थानमा मर्निङ्वाक सेन्टरका रुपमा विकसित गर्न गोसाँइकुण्ड र भ्युटावरसम्म १३००÷१४०० सिँढी निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकोछ ।
बनेपा नगरपालिका वडा नं ३ र ४ स्थित हिलेजलजले बहुउदेश्यीय कृतिम ताल निर्माण गरि आन्तरिक तथा वाह्य प्रर्यटकको आगमन र कृषि उत्पादनमा वृद्रि गरि आयआर्जनमा टेवा पुर्याउने नीति लिइएको छ ।
बनेपा चारदोबाटो रहेको क्षतिग्रस्त शालिक रहेको स्थानमा राष्ट्रिय विभूति अरनिकोको शालिक निर्माण गरिनेछ ।
धनेश्वर मन्दिरको बृहततर विकासका लागि गसरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।
५) घरेलु तथा साना उद्योग तर्फ
बनेपा नगरपालिकाभित्र उद्योगग्राम स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिइएकोछ ।
काष्ठकला, हाते उद्योग, पर्यटक सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रबर्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।
घरेलु उत्पादनलाई बजारीकरण एवं उपभोगमा विशेष जोड दिइनेछ ।
घरेलू तथा साना उद्योग संचालनमा वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरणको नीति लिइनेछ ।
लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
बिभिन्न खाले प्रवद्र्धनात्मक बजार संचालनमा जोड दिइनेछ ।
स्थानीय श्रोत साधन एवं जनशक्ति परिचालनमा विशेष जोड दिइनेछ । पर्यटक मैत्री खाद्य परिकार प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।
नगरभित्रका वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको साना उद्योग कर्जा दिन प्रोत्साहित गरिनेछ ।
६) खानेपानी तर्फ
प्रत्येक वडामा हाल प्रयोग भइरहेका स्थानीय पानीका श्रोतहरुको संरक्षण एवं ब्यवस्थित प्रयोग गरिने छ ।
सुरक्षित पिउने पानीको व्यवस्थामा सहयोग पुग्ने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
खानेपानी तथा सरफाई सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
श्रोतकोअपर्याप्तता भएका क्षेत्रहरुमा डिप बोरिङ, आकासे पानीको संकलन प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनालाई आगामी बर्ष भित्र सम्पन्न गर्न आवस्यक पहल गरिने छ ।
जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति लिइने छ ।
साँगा बृहद् खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । साथै गोसाईकुण्ड क्षेत्रमा डिप बोरिङका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
७) वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन
नगरभित्रका बनजंगल को संरक्षण र प्रवर्धन गरिने छ ।
स्थानीय समुदायको अग्राधिकार रहने गरी बन पैदावार र बन क्षेत्रको नोक्सानी नहुने गरी बन क्षेत्रको ब्यबसायिकीकरण गरिने नीति लिइएकोे छ ।
नगरपालिका क्षेत्रमा हुन सक्ने भू–क्षय न्यूनीकरणको लागि योजना बनाइने छ ।
सवारी साधन, पार्टीप्यालेस, कारखाना, उद्योग आदिबाट निस्कने ध्वनि प्रदुषणलाई व्यवस्थापन गर्न आवस्यक नियम बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।
जडिबुटीको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी व्यवसायीकरणमा जोड दिइनेछ ।
जडिवुटी तथा बन पैदावरजन्य वस्तुहरुको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्न विशेष जोड दिइनेछ ।
जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
नगर क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदा, नदी तथा खोलाहरुको स्वच्छता संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।
जैविक विविधता संरक्षण, पर्यावरण र हरियालीे संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।
हरितगृह प्रभाव न्यूनीकरणको नीति लिइनेछ ।
नगर क्षेत्र भित्र रहेका पोखरी तथा पार्कहरुलाई संरक्षण, सम्बर्धन र स्तरोन्नती गर्ने नीति लिईने छ ।
वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबद्र्धन गरी वातावरण संरक्षणमा टेवा पु¥याइनेछ ।
५० लाख भन्दा बढीका आयोजना सन्चालन गर्नपूर्व वा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नुपूर्व क्ष्भ्भ् र भ्क्ष्ब्को प्रावधानलाई अनिवार्य रुपमा पालना गरिने छ ।
हरेक घरपरिवारले कम्तीमा १ वनस्पति हुर्काई हरियाली जोगाई राखौं भन्ने नारालाई अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ ।
भूमिको क्षयीकरण रोक्न वायोइन्जिनियरिङ प्रविधिको विस्तार गरिनेछ ।
उत्पादन योग्य जमिनमा प्लटिङ गरी आवास विस्तार गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ ।
प्रकोपको दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिममा रहेका नदी तथा खोलाहरुलाई तटबन्धन तथा बायोइन्जिनियरिङको प्रविधिले नियन्त्रण गर्ने योजना बनाइनेछ ।
फोहोर ब्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ ।
दैनीक रुपमा उत्पादन हुने घरायसी फोहरलाई व्यवस्थापन गर्न उत्पादनकर्तालाई नै प्रोत्साहन गरिने छ । यसका लागि
गड्यौला खेती, कौशी खेती र फोहरबाट मल तथा ग्याँस निकाल्ने प्रविधिको खोजी र विकास गरिने छ ।
नगरपालिकाको फोहोर व्यबस्थापनको लागि उपयुक्त स्थानमा ल्यान्डफिल्डसाइटको व्यवस्था र प्रयोगका लागि योजना बनाइने छ ।
बस्ति बिस्तार र विकास भएका ठाउहरुबाट निस्कने तरल फोहर व्यबस्थापनको लागि फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
कारखाना तथा उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने फोहर तथा केमिकलहरुको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रलाई नै जिम्मेवार बनाईने छ ।
फोहर व्यवस्थापन र सररफाई सम्बन्धी सवारी साधान, उपकरण र जनशक्तिलाई दुरुस्त राखी सेवालाई प्रभावकारी बनाईने छ ।
दिर्घकालिन रुपमा ठोस फोहोरको व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्र संगको सहकार्यमा व्यवस्थापन गर्न प्रकृया टुङगाइएको छ ।
आवश्यकता अनुरुपका स्थानहरुमा निजी क्षेत्र संगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण र व्यवस्थापनको नीति लिएको छ ।
नगर क्षेत्रका भुस्याहा कुकुर नियन्त्रणका लागि आवस्यक कार्यक्रम ल्याइने छ ।
नगर क्षेत्रभित्र चौपायाहरु वेवारिसे अवस्थामा छोड्ने कार्यलाई कडाइका साथ अनुगमन गरीदोषीलाई कार्वाही गर्ने नीति लिइने छ ।
८) सूचना तथा संचार विकास तर्फ
बनेपा नगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाको नगर प्रोफाईल, निर्माण तथा अद्यावधिक गरिनेछ ।
आवधिक नगर विकास योजना, नगर यातायत गुरुयोजना, कृषि विकास गुरुयोजना, बस्ती विकास गुरुयोजना, नगर भूउपयोग योजना निर्माणमा जोड दिइनेछ । यसैलाई आधार मानी बार्षिक नगर विकास योजना तयार गरिने छ ।
नगरपालिकाकाको तथ्याङ्कलाई एकद्वार प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।
सूचना तथा तथ्यांकहरुलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न सफ्टवेयरहरुको प्रयोग गरिने छ ।
नगरपालिका बाट प्रवाह हुन सेवाहरुमा कम्प्यूटराइज गर्दै लगिनेछ ।
बनेपालाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने छ ।
आवश्यकता अनुरुपको दुरसंचारको टावर स्थापना र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने छ ।
टेलिफोनको ल्यान्डलाइन सेवा विस्तारमा जोड दिइनेछ ।
नगरपालिकाका गतिविधिहरुलाई वेवसाइट मार्फत प्रकाशन र अध्यावधिक गरिने छ ।
नगरपालिका क्षेत्रमा संचालनमा रहेका एफएमहरुलाई नगर विकासका गतिविधि प्रशारण गर्न प्रोत्साहन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
नगर क्षेत्रमा रहेका छापा र टेलिभिजनहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरि नागरिकहरुको सूचना पाउने हकको सुनिश्चित गरिने छ ।
सूचनाको हक ऐनका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन र अनुशरण गरिनेछ ।
९) भूमि व्यवस्थापन तर्फ
सार्वजनिक भुमिको पहिचान र अभिलेखन गरी अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
सरकारी, पर्ति जग्गाको लगत लिई सोको संरक्षणका लागि उपयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ ।
डिजिटल नापी प्रणालीलाई क्रमश लागु गरिने छ ।
भूउपयोग योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गरिने छ ।
वस्ति विकासका लागि प्लटिङ गर्दा अनिवार्य रुपमा नगरपालिका संग अनुमति लिनु पर्नेछ । अनुमति विना प्लटिङ गरिएका जग्गाहरुमा घरहरुको नक्सापास नगरिने नीति लिएको छ ।
प्लटिङ गरिएका जग्गामा विकास शुल्क लिईनेछ । जग्गा विकास कार्यक्रम मार्फत व्यवस्थित बस्ती विकासको नीति लिइनेछ ।
नेपाल सरकारको नीति अनुसार गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ ।
१०) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तर्फ
बनेपा नगरपालिकासँग मिल्दा र इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय सहर, निकायहरुसँग भगिनीसम्बन्ध स्थापना गरिनेछ ।
बनेपाको भगिनी सम्बन्ध भएको जनवादी गणतन्त्र चिनको सिगात्से नगरसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत, प्रगाढ एवं उपयोगी बनाइनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा अनुकूल स्थानहरुको अवलोकन भ्रमण एवं सिकाइ आदान–प्रदानका कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिनेछ ।
नेपालको संविधान र कानुनको परिधीमा रहि बैदेशिक सहयोग, ऋण आवश्यकता अनुसार लिइनेछ ।
११) स्थानीय स्रोत परिचालन तर्फ
बनेपा नगरपालिकाद्वारा टोल सुधार समिति गठन गर्दा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने,त्यस्ता संस्थाहरुको क्षमता विकास र तिनिहरुलाई विकासका कार्यक्रमहरुमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
बनेपा पोलीटेक्नीकल स्कुल, बनेपा प्राविधिक शिक्षालय र यस्ता अन्य स्रोतहरुको पहिचान र परिचालनका उपयुक्त विकल्पहरुको खोजी गरिने छ ।
सामाजिक परिचालनका लागि काम गर्ने सम्पूर्ण निकायहरुको सामाजिक परिचालनको बजेट एकै बास्केटमा राखी एकरुपता कायम गर्न पहल गरिनेछ ।
रुढीवादी र अन्धविश्वासमा आधारित मूल्य मान्यताहरुमा सुधार ल्याउने तर्पm सामाजिक परिचालन सचेतना मुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्रमा भएका सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको पहिचान गरी उपयुक्त तवरले पहिचान परिचालन र सदुप्रयोग गर्ने नीति लिईने छ ।
गैह्र सरकारी संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकार्यलाई अघि बढाउन सामाजिक विकास साखालाई प्रभावकारी एंवम व्यबस्थित बनाइने छ ।
१२) वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन ÷सुशासन र सेवा प्रवाह तर्फ
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरुमा हुन सक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाई लागू गरिने छ ।
नगरपालिका र हरेक वडाहरुमा नागरिक वडापत्र राखिने छ । नागरिक वडापत्रको विषयमा नागरिकहरुलाई सुसुचित गर्न पत्रपत्रिका, एफएम, टेलिभिजनहरुबाट जानकारी गराईने छ ।
आविधिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिने छ । सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका सवाल र सम्बोधनको विषयमा समिक्षा गरिने छ ।
नगरपालिकाको सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा नागरिकहरुले गुनासो तथा उजुरी गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गरिने छ ।
नगरपालिकामा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरी गुनासो अभिलेखन तथा सम्बोधनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
कर्मचारीहरुमा व्यावसायिकनिपूर्णता ल्याउन कार्यसम्पादन करार, कार्यविवरण, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीबाट सम्पादन हुने विकास निर्माणको कार्यको प्रभावकारी रुपमा सार्वजनिक परीक्षण गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
नगरपालिकाको बार्षिक रुपमा लेखा परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण बजेट परीक्षण कार्यहरु सन्चालन गरिने छन्।
नगरपालिकाका गतिविधिहरुलाई मासिक, त्रैमासिक रुपमा सूचना पाटी, नगर विकास बुलेटिन, ध्भदकष्तभ तथा अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गरिनेछ ।
‘जनतासँग मेयर’ रेडियो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
अन्तमा स्थानीय तहको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको तेस्रो नगर सभामा प्रस्तुत भएको उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदनका लागि सभाका सदस्य महानुभावहरुमा अनुरोध गर्दछु । साथै स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिज्यूहरु, आम नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु र नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरुबाट सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
मिति: २०७५ असार २८ गते विहिवार